Isikhokelo sokubhiyozela umnyaka omtsha waseTshayina
Funda iMasiko kunye neNkcubeko ukulungiselela kunye nokubhiyozela uNyaka omtsha waseTshayina
Unyaka omtsha waseTshayina ngowona ubalulekileyo kwaye, kwiintsuku eziyi-15, iholide ende kunazo zonke e-China. Unyaka omtsha waseTshayina uqala ngosuku lokuqala lwekhalenda yenyanga, ngoko kuthiwa ngu-Unun Year New, kwaye uthathwa njengesiqalo sentwasahlobo, ngoko kuthiwa yiSpring Festival. Funda amasiko kunye namasiko eNyaka omtsha waseTshayina kunye nendlela yokulungiselela nokubhiyozela uNyaka omtsha waseTshayina.
I-Basics ye-Chinese New Year
Andrew Burton / Getty Izithombe Iindaba / Getty Izithombe
Funda indlela yokubhiyozelwa kweNtshukumo emNyaka weTshayina kunye nendlela iguquke ngayo ngokuhamba kwexesha.
Imvelaphi yoNyaka omtsha waseTshayina
Umlando woNyaka omtsha waseTshayina
Kukho ibali elidumileyo ngabantu abadla isidlo esibizwa ngokuba yi-Nian. I-Chinese yaseNew Year, 过年 ( guònián ) ivela kweli bali.
Imihla ebalulekileyo yoNyaka omtsha waseTshayina
Getty Izithombe / Sally Anscombe
Umnyaka omtsha waseTshayina ubanjwe ngemihla eyahlukeneyo ngonyaka. Imihla isekelwe kwikhalenda yenyanga. Unyaka ngamnye unesilwanyana esifanayo esivela kwiShayina iSodiac, umjikelezo wezilwanyana ezi-12. Funda indlela i-zodiac yaseTshayina isebenza ngayo .
I-Getty Images / BJI / Izithombe zeBlue Jean
Uninzi lweentsapho luqala ukulungiselela inyanga okanye ngaphezulu kwangaphambili kunyaka omtsha waseTshayina. Nantsi isikhokelo kwinto ekufuneka yenziwe phambi koNyaka omtsha waseTshayina:
Imisebenzi yokwenza ngaphambi koMnyaka omtsha waseTshayina
Fumana ukuba kutheni amaDumplings adla kwiNtshonalanga YaseTshayina. Nantsi indlela yokwenza iindwangu zaseTshayina ekhaya.
Isikhokelo sokuHlongiswa koNyaka olutsha lweChina ( eChunlian)
Iingubo zonyaka wamaNtshonalanga: I- Qipao yaseTshayina kunye nesiko seengubo ezibomvu zangaphantsi
I-New Year's Gift-Giving Etiquette
Indlela yokugubha umnyaka omtsha waseTshayina
Umnyaka omtsha waseTshayina uquka iiveki ezimbini zokubhiyozela kunye nemisebenzi emininzi eyenzeka ngosuku olusemva (uNyaka woNyaka omtsha), usuku lokuqala (Usuku Lomnyaka Omtsha) kunye nomhla wokugqibela (uMkhosi weLanga). Nantsi indlela yokubhiyozela.
Ukubhiyozela u -Eva unyaka omtsha
Ukubhiyozela Usuku Lomnyaka Omtsha
Ukubhiyozela iintsuku 2-13
Ukubhiyozela iLangtern Festival
Ukukhanya kweLanga kunye nokuThetha
Yintoni ebhaliweyo kwiLanga lakho
Imibhiyozo yoNyaka omtsha waseTshayina e-China nakwihlabathi
Idolophu yaseChina, eSan Francisco, eU.SA. I-Getty Izithombe / I-WIN-Initiative
Umnyaka omtsha waseTshayina: Hong Kong
Umnyaka omtsha waseTshayina: Macau
Umnyaka omtsha waseTshayina: iShailand
Unyaka omtsha waseTshayina kwihlabathi
Umnyaka omtsha waseTshayina: Isixeko saseNew York
Umnyaka omtsha waseTshayina: iSan Francisco
Umnyaka omtsha waseTshayina: Los Angeles
Umnyaka omtsha waseTshayina: Washington, DC
Umnyaka omtsha waseTshayina: eUnited Kingdom
Umnyaka omtsha waseTshayina: iParis
Ukuguquka kwe-Yellow Turban eChina, 184 ukuya ku-205 CE
Ukubhiyozela iiNtsuku zokuzalwa
Amaqiniso Ngabantu abadala kwiChina
"Yakha Ushishino" Umsebenzi wokudiliza i-Ice kwiKlasi lakho
I-Monatomic Ion Inkcazo kunye nemizekelo
Ubukhulu kunye neMida kwiSalasti ye-Waterski Course
Uqeqesho oluPhambili lweeArms: Icandelo 2 - iBrachialis neBrachioradialis
IYunivesithi yasePuget Sound Admissions
I-Admissions kwiYunivesithi yaseSan Diego
Indlela Yokufundisa Ukuvakalisa Ingxelo
IYunivesithi yaseWisconsin-La Crosse Admissions
Iebhodi yomlilo: I-Rainbow Chemistry Ukubonakalisa
Inkcazo yeXenophobia kunye nemizekelo yokuchaza indlela yokuSebenza
Indlela yokuthenga i-Mustang esetyenzisiweyo